साेलुखुम्बुमा उडिरहेकाे हेलिकाेप्टरबाट जस्तापाता ख,से,पछि…. – " सुलभ खबर "
साेलुखुम्बुमा उडिरहेकाे हेलिकाेप्टरबाट जस्तापाता ख,से,पछि….
सोलुखुम्बु : सोलुखुम्बुमा उडिरहेको हेलिकोप्टरबाट जस्तापाता लगायत निर्माणका सामाग्री ख,से,को छ ।सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका १ काे टाक्सिन्दु डाँडाबाट खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका ४ दिङ्बुचेका लागि कार्गोसहित उडेको हेलिकोप्टरबाट ती सामग्री खसेको सोलुखुम्बु प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । सोलुखुम्बुको लागि यो घटना भने पहिलो होइन ।
शनिबारको घ,ट,ना घ,ना जङ्गलमा भएकाले मानवीय क्ष,ति भने नभएको लुक्ला विमानस्थलका प्रमुख इमनाथ अधिकारीले बताउनुभयो । तर कुनै मानव बस्तीमा त्याे घटना भएकाे भए ठूलै क्षति हुने अधिकारीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार त्याे हेलिकोप्टर लुक्ला विमानस्थलको हेलिप्याडमा सकुशल अवतरण गरेको छ ।
हेलिकोप्टर कम्पनीको मनाेमानीलाई स्थानीय प्रशासन तथा विभागले समेत सहयोग गरिरहेको स्थानीय पासाङ शेर्पाले बताउनुभयो सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमा आचार्यले भने यस घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएको भन्दै प्रहरीको स्थलगत रिपोर्टपछि थप निर्णय गर्ने बताउनुभयो । संवेदनशील घटना घटेको भन्दै प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ गएकाे उहाँकाे भनाइ छ । घना जङ्गलमा ती सामग्री खसेकाले प्रहरी पुग्न कठिन भएको बताइएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले भने आइतबार आकस्मिक बैठक बसेर निर्णय गरिने बताउनुभयो । घटनाको विषयमा लिखित जानकारी प्राप्त भएकाले समस्याको दिगो समाधानतर्फ लाग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयाे । ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै उहाँले विमानस्थलबाटै उडान गर्ने गरी निर्णय गर्न सकिने
बताउनुभयो । बारम्बार घ,ट,ना भएको जानकारी आएकाले नियमअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन नागरिक उड्डयन कार्यलय गम्भीर भएर लाग्ने बताउनुभयो ।साेलुखुम्बुकाे माथिल्लो खुम्बु क्षेत्रमा सडक पहुँच नभएकाले सामान ढुवानी गर्ने सहज माध्यम नै हेलिकोप्टर रहेको छ । तर नियम विपरीत मनाेमानी रुपमा उडान तथा अवतरण गर्दा त्यस क्षेत्रका स्थानीयदेखि वन्यजन्तुलाई समेत असर परेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज नाम्चेका प्रमुख भूमिराज उपाध्ययले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उडान तथा अवतरण बापतको राजश्व समेत उठ्न सकेको छैन ।